यी कारणले हुन्छ, महिनावारी गडबड - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यी कारणले हुन्छ, महिनावारी गडबड
मेरो लाइफस्टाइल	||9January, 2022
डा. मीना प्रधान, स्त्री रोग विशेषज्ञ
सामान्यतयाः महिनावारीलाई २८ दिनको मासिक चक्र मानिन्छ । यदि, कुनै पनि महिलामा पछिल्लोपटक महिनावारी भएको ६ हप्तादेखि सोही क्रम पुनः नदोहोरिएको अवस्थामा भने त्यसलाई चिकित्सा क्षेत्रअन्तर्गत ‘मिस पिरियड’ अर्थात् अनियमित महिनावारी अवस्थाको संज्ञा दिइन्छ ।
महिनावारी भएको पहिलो एक–दुई वर्ष नियमित महिनावारी नहुन सक्छ, त्यसलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । महिनावारी शुरु भएको एक–दुई वर्षपछि नियमित हुने गर्छ । नियमित भनेको २८ देखि ३५ दिनभित्र महिनावारी हुनु हो । यसलाई नर्मल महिनावारी चक्र भन्ने गरिन्छ ।
२८ देखि ३५ दिनभित्र महिनावारी दुईपटक भएको खण्डमा वा ३५ दिन नाघेर भएमा गडबड भएको बुझ्नुपर्छ । नियमित महिनावारी हुने महिलामा गडबडी भयो भने के कारणले भयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।
हर्मोनको गडबडीले महिनावारी गडबडी हुने गर्छ । महिनावारी सुक्ने बेलामा पनि कतिपयमा यो समस्या देखिन्छ । थाइराइड ग्यालनको घटबढले गर्दा पनि महिनावारी नियमित नहुन सक्छ । कसैको पाठेघरमा ट्युमर पलाएको छ भने महिनावारीमा गडबडी देखापर्छ । पाठेघरको मुखमा घाउ, ट्युमर वा क्यान्सर छ भने महिनावारीमा गडबड हुन सक्छ ।
– सर्वप्रथम महिनावारी गडबड हुने कारण पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसैअनुरूपको उपचार गर्नुपर्छ ।
– पोषिलो खानेकुरा खानुपर्छ र प्रदूषित वातावरणबाट जोगिनुपर्छ ।
– नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नुपर्छ ।
– कुनै पनि रोगको लक्षण देखिए हेलचेक्र्याइँ नगरेर बस्नुहुँदैन ।
– नियमित व्यायाम गर्नुपर्छ ।
– जथाभावी महिनावारी रोक्ने औषधिहरूको सेवन गर्नुहुँदैन ।
महिनावारीका बेला प्याड तथा कपडाको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
महिनावारीको बेला अत्यधिक पेट दुख्छ ? यस्तो गर्नुस् - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] बेलामा पेट दुख्नु सामान्य लक्षण हो । महिनावारीको क्रममा पाठेघरभित्रबाट रगत पनि […]